संगीन श्रेष्ठ (Sangeen DON)
जनमुक्ति सेनाले पनि हिन्दुराष्ट्रका लागि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं, कार्तिक २६ – बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संघर्ष समितिले हिन्दूराष्ट्रको पूनस्थापनाका लागि राष्ट्रव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उनीहरुले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाश्चात्य संस्कृतिका ठेकेदारहरुले क्रिश्चियनहरुबाट डलर खाएर नेपाललाई धर्म निरपेक्षता राष्ट्र बनाएको भन्दै तत्काल हिन्दूराष्ट्र कायम गराउन आफूहरु आन्दोलनमा होमिने जानकारी दिएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक लेनिन विष्टले वैदिक सनातन धर्म ॐ कार परिवारभित्र रहेका ८४ प्रतिशत हिन्दूहरुको अस्तित्व नै संकटमा रहेको भन्दै आफ्नो संस्कृति, धर्म जोगाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने–‘‘नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरित छ, यो निर्णयले लोकतन्त्रको ठाडो उपहास भएको छ । हामी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएर छाड्छौं ।’’ वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल संयूक्त संघर्ष समितिका संयोजक कुमार बहादुर थापाले नेपालमा हिन्दूराष्ट्र हटाउन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले ठूलो भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । थापाले अहिले पनि संविधानसभामा ५५१ जना सभासदहरु हिन्दू भएको जानकारी दिँदै बहुमतको कदर गरिनुपर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
थापाले भने–‘‘ नेपालमा हिन्दूराष्ट्र कायम नगरीए पार्टीहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ, किनकी सबै राजनीतिक दलभीत्र हिन्दूहरु छन । हामीलाई सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको औपचारिक अनौपचारिक समर्थन छ । ’’
थापाले आगामी मंसिर ३ गते संविधानसभा घेराउ तथा १०८ शंख घोष, ४ गते उपत्याकाव्यापी बृहत्त मोटरसाईकल ¥याली लगायतका विभिन्न संघर्षका कार्यमहरुको समेत घोषणा गरेका छन् ।
प्रमुख अतिथि श्री श्रीनिवासाचार्यले नेपालमा हिन्दूराष्ट्र केही बदमाशहरुले हटाएको आरोप लगाउँदै अहिले पनि नेपाली काँग्रेस, राप्रपा नेपाल र नेकपा एमालेका केही नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न हिन्दूराष्ट्रको माग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
श्रीनिवासाचार्यले आफूमाथि ठूलो चलखेल भएको उल्लेख गर्दै धर्मलाई राजनीतिक मद्दा बनाउन नहुने उद्घोष गरेका छन् । उनले भने–‘ म गौमाताको रक्षा गर्न, हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्नका लागि आफ्नो जीवन नै आहुति दिन पनि तयार छु, तर कसैले चलखेल गरे चुप लागेर बस्दिन् ।’’
त्यस्तै राप्रपा नेपालका सभासद विक्रम बहादुर थापाले नेपाल र नेपालीहरुको पहिचानलाई रक्षा गर्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । थापाले राप्रपा नेपालको एजेण्डा भन्दा पनि आफ्नो धर्म र संस्कृति बचाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धाराणा राखेका छन् ।
उनले भने–‘‘ ८१ प्रतिशत हिन्दूहरु भएको मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नु अत्यन्तै गलत हो, हामी जुनसुकै मूल्यमा पनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाईछाड्छौं ।’’
Posted by Sangeen Shrestha at 6:51 AM No comments: Links to this post
कति मिच्यो भारतले ६४ वर्षमा नेपाली भूमी ?
भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ भन्दाबढी ठाउँमा नेपाली भू-भाग मिचिएको छ । भारतसँग जोडिएका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमणबाट चोखा रहेका छन् ।
भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी पछिल्लो दाङ र बाराबाहेक भूभाग मिचिएको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र मेची-महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीबलको तथ्याङ्कअनुसार ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये२ हजार ३ सय ५८ मात्र सामान्य अवस्थामा छन् ! जङ्गे पिलरहरु छैनन् । अनौठाखालका पिलरहरु सिमानामा भेटिए ।” यस विषयमा वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । सन् १९८१मा नेपाल-भारत संयुक्त सीमा समिति गठन भएर त्यसले २००७ डिसेम्बरमा आपुनो काम सकेको बताउँदै उनी भन्छन्- “तर त्यसमा पनि विवाद कायमै छ ।
सो समितिले ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन गरेका दावी गर्दै १८२ थान नक्सा बनाएको दाबी गरेको छ तर त्यो सरकारी स्तरमै गोप्य राखिएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले समेत सीमा विवाद रहेको स्वीकार गरेका थिए । अर्का सीमाविद् फणिन्द्र नेपाल अङ्ग्रेजले भारतलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्दा नेपालको भूमि पनि मुक्त गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले यस मुद्दालाई सार्क आसियान र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियन्यायालयमा जान पनि सकिन्छ । ”
सुगौली सन्धिबाट गुमेको एकतिहाई भूभाग फिर्ता गर्ने सवालमा नेपालको यस्तो तर्क रहेको हो । सन् १९४७ सालमा स्वतन्त्र भएदेखि भारतले नेपालको भूमि लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतले १ लाख ४३ हजार वर्गकिलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल भएको नक्सा बनाएको सीमाविद् नेपालको दावी छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित भएको थियो ।
सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४ हजार ६ सय १६ वर्गकिलोमिटर थियो । नेपाल र भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएको छ त्यो पनि सीमाभन्दा ३-४ किलोमिटर भित्र मात्र ।
भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका चितवन दाङ र पहाडका इलाम पाँचथर ताप्लेजुङ डडेल्धुरा बैतडी र दार्चुलामा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि कुनै सशस्त्र फोस्र तैनाथ गरिएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको १४ सय १५ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । ती नाकाहरुमा नेपालले सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएको छैन । भलै चीनसँग नेपालको सीमा समस्या हल भइसकेको छ ।
भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाल भारत सीमामा भारतले ४५ हजार सेना तैनाथ गरेको छ । अर्थात् प्रत्येक एक किलोमिटरमा २५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । भारत र नेपालका बीचमा ८ हजार ५ सय र चीनसँग जोडिएका करिब १ सय सीमास्तम्भहरु छन् । तर ती सीमास्तम्भहरुकोअवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई छैन ।
सीमाको सही व्यवस्थापन गर्न र भारतीय बसाइसराई रोक्न नेपाल-भारत सीमारेखामा काँढेतार लगाउनुपर्छ भन्ने सीमाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । सीमाविद् फणिन्द्र नेपाल भन्छन् “काँढेतार लगाउने हो भने भारतीय डकैतीबाट पनि नेपालीहरु सुरक्षित हुने थिए । ” अझ परिचयपत्रका आधारमा मात्र सीमामा आवत-जावत गर्दा उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् ।
Posted by Sangeen Shrestha at 12:39 AM No comments: Links to this post
राष्ट्रियताको आन्दोलन र नेपाली भुमी
नेपाली भुमीमाथी भारतीय पक्षवाट निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको खवर पत्रपत्रीकाहरूमा प्रकाशीत भइरहन्छन् तर केहिसमय हल्लाखल्ला मच्चिएपछि यस्ता कुरा त्यतिकै सेलाएर जानेगरेको पनि छ । केहि देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरू सुगौली सन्धि मार्फत इष्ट इण्डिया कम्पनीले प्राप्त गरेको भुभागसमेत भारतले नेपाललाइ फिर्ता गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्दैछन् । यसर्थ, नेपालको भुमी कहांसम्म हो र हाम्रो स्वाभिमान के हो भन्नेवारे सवैले वुझ्नु जरूरी देखिन्छ। विश्वमै सवैभन्दा पुरानो संस्कृति र मानव सभ्यताको विकास भएको दक्षीण एशीयामा पर्ने हिमालय खण्डको इतिहास पुरै खोतलेर हेर्दा नेपालको अस्तित्व त्यतिवेलै प्रभावशाली रूपमा स्थापीत भएको पाइन्छ । यसैले यहां नेपालको ऐतिहासीकता र त्यसपछि विस्तारीत भुमी पत्ता लगाउने सिलसिला पौराणीक कालवाटै शुरू गरिएको छ ।
स्कन्द पुराण अनुसार हिमालय क्षेत्रलाइ भौगोलिक रूपले पॉच भागमा विभक्त गरिएको छ:-
खण्डाः पञ्च हिमालयस्य कथिताः नेपालकूर्माँञ्चलौ ।
अर्थात् हिमालय क्षेत्रमा नेपाल, कुर्मांचल, केदारखण्ड़ (गढवाल), जालन्धर ( हिमाञ्चल प्रदेश ) तथा सुरम्य काश्मीर पॉच खण्ड पर्दछन्। पौराणिक ग्रन्थमा कुर्मांचल क्षेत्र मानसखण्डको नामले प्रसिद्व थियो। जस अनुसार, यस उत्तरी हिमालय क्षेत्रमा सिद्ध गन्धर्व, यक्ष, किन्नर जातिको सृष्टि भयो त्यतिवला यहांका राजा कुबेर थिए। कुबेरको राजधानी अलकापुरी (बद्रीनाथ नजिक) बताईएको छ। पुराण अनुसार राजा कुबेरको राज्यमा आश्रम वनाइ ऋषि-मुनिहरू तप, साधना गर्थे। त्यतिवेलै पनि यि क्षेत्रहरूमा नेपालको भुमीका प्रभावशाली थियो । पौराणीक कालपछि यस क्षेत्रमा चन्द राजाहरूको शासन प्रारम्भ भइ सन् १७९० सम्म कायम रह्यो। सन् १७९० मा गोरखाली सेनाले कुमांऊमाथी आक्रमण गरि आफ्नो अधीन गरेपछि सन् १८१५ सम्म शासन गरे। सन् १८१५ मा अंग्रेजसंग सुगौली सन्धि भएपछि गोरखाली सेना आफ्नो एकिकरण अभियान स्थगीत गरि नेपाल फर्के तर अंग्रेजले कुमांऊको शासन चन्द राजालाइ नदिइ ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अधीनमा गरे। यस प्रकार कुमांऊमाथी अंग्रेजको शासन १८१५ वाट प्रारम्भ भयो।
ऐतिहासिक विवरण अनुसार केदारखण्ड धेरै गढ (किल्ला) मा विभक्त थियो। प्रत्येक गढमा अलग राजा थिए, र आफ्नै आधिपत्य रहेको क्षेत्र थियो। इतिहासकारहरूका अनुसार पंवार वंशका राजाले यि गढहरूलाइ आफ्नो अधीनमा ल्याइ एकीकृत गढवाल राज्य स्थापना गरे र श्रीनगरलाइ राजधानी बनाए। केदारखण्डलाइ त्यतिवेलैदेखी गढवाल भन्न थालियो। सन् १८०३ मा गोरखाली सेनाले गढवाल राज्यमाथी आक्रमण गरि आफ्नो आधीपत्य कायम गरे । पछि त्यहांका महाराजाले गोरखालीहरूको अधिपत्यवाट मुक्त गराइदिन अंग्रेजसंग सहायता मागे । अंग्रेजहरूले यसलाइ उचित अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै गोरखाली संग युद्द लडे। रणनितीक चातुर्यता र प्रशष्त सेना रहेको अंग्रेजसंग आपसी खिंचातानीमा अल्झेको दरवारका कारण गोरखालीहरूको केही जोर चलेन र अन्तमा १८१५ को सुगौली सन्धिमार्फत अन्तिम रूपले परास्त भएको ठहरिए ।
गढवालका तत्कालीन महाराजाले युद्धमा लागेको व्ययको निर्धारित धनराशी भुक्तान नगरेको भन्दै अंग्रेजहरूले गढवाली महाराजालाइ केवल टिहरी जिल्ला (वर्तमान उत्तरकाशी सहित) को भू-भाग मात्र दिए र वांकी सम्पूर्ण गढवाल राज्य (अलकनन्दा मन्दाकिनीको पूर्वी भाग) आफ्नो अधिनमा लिए । गढवालका तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाहले २८ दिसम्बर १८१५ मा टिहरीमा भागीरथी र मिलंगनाको संगमस्थित सानो गाउंमा खुम्चेर त्यहीं आफ्नो राजधानी स्थापित गर्न वाध्य भए । यसरि सन१८१५ वाट देहरादून र पौडी गढवाल (वर्तमान चमौली जिल्ला तथा रूद्र प्रयाग जिल्लाको अगस्तमुनि र ऊखीमठ विकास खण्ड सहित) अंग्रेजको अधीनमा भयो, टिहरी भने गढवाली महाराजाको अधीनमा छाडियो। यो टिहरी राज्य १९४९ को अगस्टमा भारतीय गणतन्त्रमा विलय हुंदा तत्कालीन संयुक्त प्रान्तको एक जिल्ला घोषित गरियो। पछि भारत-चीन युद्वको पृष्ठभूमिमा सिमान्त क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सन् १९६० मा भारतले यस क्षेत्रलाइ उत्तरकाशी, चमौली र पिथौरागढ नामक तीन सिमान्त जिल्लाहरूमा विभाजन गर्यो ।
यि ऐतिहासीक तथ्यहरू हेर्दा भारतले यी क्षेत्रलाइ आफ्नो भनि दावी गर्ने एउटै आधार सुगौली सन्धिमात्रै हो। अन्यथा कुर्मांचल क्षेत्र र केदारखण्डभनि पुराणमा वर्णित सवै क्षेत्र अंग्रेजहरूले भारत छाडेदेखी नै नेपाल अन्तर्गतको भुमी हुनुपर्ने थियो । तर, तात्कालिन राणा शाषकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउने लोभमा पर्दा सो भुभागको दावी गर्नु आवश्यक ठानेनन् । तिनीहरूको त्यही कुकर्मको फल आज आम नेपालीहरूले भोगिरहेका छन् । तर, अझैपनि वेलायतले हङकङ चिनलाइ फिर्ता गरेको नजिर पेश गर्ने हो भने यो भुभाग नेपालले फिर्ता पाउने प्रशष्त आधार भेटिन्छ । यद्यपी, नेपाल र नेपाली जनताले यि कुराहरूप्रति मौन रहंदा रहंदैपनि भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथी हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन ।
राणा शासन, त्यसपछिको शाहवंशीय तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरु कुनैले पनि नेपाली माटो र जनताप्रति इमानदारिता देखाउन नसक्दाको कारण नै नेपालीहरूले राजनीति देखी सीमा क्षेत्रसम्म भारतीय अतिक्रमण निरन्तर भोग्दै आएका छन् । भारतीय इशारामा नै सरकार, मन्त्रिमण्डल र विकास निर्माणका योजनाहरू बन्न थालेपछि नेपाली राजनीतिमा भारतीय दादागिरि कायम रहन पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । सरकारमा बस्नासाथ नेपाली शासकहरू भारतीय आशीर्वाद प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम भारत भ्रमणमा जाने परम्परालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिए । यसै परम्परालाई तोड्न खोज्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अन्ततः सत्ता छोड्न बाध्य हुनुपर्‍यो । जनआन्दोलन- १ का बेला पनि राजा वीरेन्द्रले भारतीय स्वार्थअनुसार चलेको भए व्यवस्था परिवर्तन हुने थिएन । जनआन्दोलन-२ का बेला भारतीय स्वार्थअनुसार ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियता समर्पण गरेका भए यो परिवर्तन यति सजिलोसंग हुने थिएन । उनमा शासक बन्ने तीव्र इच्छा पलाएको, तर भारतीय ईशारामा नचलेका कारण भारत चिढिएको र त्यही क्रोधका कारण ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्ने माओवादी प्रस्तावप्रति भारतले विना हिच्किचाहट सहयोग गरेको विगतलाई पनि विर्सनु हुंदैन । यसरि भारतीय विस्तारवादले के सावित गरिदिएको छ भने उसको सहयोग र आशीर्वादबिना नेपालका कुनै पनि सरकार टिक्ने छैनन् । तर वास्तविकता त्यसो नभइ, जनमतको विश्वास नगर्ने तर सरकारमा हालीमुहाली भने संधै गर्न चाहने राष्ट्रघाती तत्वहरूकै कारण अहिले मुलुकको अस्तित्व संकटमा परेको हो । यसैकारण कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियता मागिखाने भांडो भएकोपनि देखिएको छ ।
सरकार जति वनेपनि कुनै स्पष्ट विदेश नीति नभएको र सन् १९५० लगायतका सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न कुनै प्रयास नगरिएकाले अहिले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप सतहमै देखिने गरी ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । यद्यपी माओवादी नेतृत्वको सरकारले शुरुमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दालाई उठाउने कुरा गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि उसले भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विषयलाई राष्ट्रियता, जनजीविका र नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनसंगै जोडतोडले उठाइरहेको छ । तर ठुला भनिएका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उल्टो जसरि हुन्छ सत्ता टिकाईदिनु पर्‍यो भनेर भारतसामुन्ने हातपाउ पसारी रहेका छन् । यसले पनि भारतीय सहयोग र सम्मानमा पदीय तथा आर्थिक लाभमा पुगेपछि नेताहरूले जनता र राष्ट्रप्रति कत्तिको संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्छन् भन्ने कुरा छर्लंग बनिरहेको छ । भारतीय सहयोगबिना हामी कुर्सीमा बस्न जानै सक्तैनौं भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएका नेताहरू त्यही बिम्बका साथ सिंहदरबार छिर्दै आएका छन् । त्यही मानसिकता बोकेका दलालहरुको समुहले शाहवंश, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र एमालेलाई खाइसकेको छ भने पछिल्ला दिनहरुमा माओवादीलाई पनि यसले गांज्दै लगेको प्रतित हुंदैछ ।
२००७ साल, २०४६ वा २०६२/६३ मा भएको भनिएको परिवर्तन होस् या त्यसपछि बनेका सरकारहरू कुनै न कुनै रुपमा भारतीय विस्तारवादी नीतिको शिकार मात्र भएनन् कि उनीहरू आत्मसमर्पण गरेरै भए पनि सत्ता टिकाउने खेलमा लागिरहे । त्यसैको फलस्वरूप कोशी, गन्डकी र महाकाली नदी त बेचिइनै सकेका छन् भने अझै कति बेचिने अन्तिम तयारीमा छन् । राजा महेन्द्रकै पालामा दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएका थिए । चुपचाप रहेर उनलेपनि सत्ता स्वार्थका लागि आफ्नो माटो बेचिदिए । तर, त्यतिलेमात्रै नपुगेर महेन्द्रको मृत्यु समेत स्वाभाविक नभई तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धिवाट आएको दवाव र धम्कीको सामना गर्न नसकेकाले आत्महत्या गरेको भन्नेसम्मको गाईंगुईं सुनिएको थियो । खैर, यसको वास्तविकता जे भएपनि भारतीय विस्तारवाद कतिसम्म नांगो रुपमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने त अहिले मुलुकको वस्तुगत यथार्थलाई वुझ्न सक्ने जोसुकैले अनुमान लगाएकै विषय हो ।
जे होस्, तात्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतीय दुतावासमा लगेर वुझाएको राष्ट्रिय स्वाधिनता र महेन्द्रकालमा थालनी भएको नेपाली माटोमाथि भारतीय अतिक्रमण अहिलेसम्म जोडतोडका साथ अघि वढि नै रहेको छ, जसलाइ अहिले एनेकपा माओवादीले नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गरेको छ । यसलाइ सत्ताप्राप्ति या अन्य कुनै राजनैतिक स्वार्थसंग उसले नसाटेमा र सकेसम्म सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको भुमी पुरै फर्काउने या तत्काल त्यति संभव नभएमा कमसेकम सन् १९५० को सन्धिलाइ नेपाली हित प्रतिकुल नहुनेगरि प्रतिस्थापन गरि त्यसअघिको नेपाली भुभागलाइ फर्काउन सकेमात्र पनि विश्वमानचित्रमा नेपाली स्वाभिमानले पुनः एकपटक टाउको उठाउन सक्नेछ । अन्यथा जनविश्वासमाथी कुठाराघात गरेकोमा राजनितीको केन्द्रमा रहेर सत्ताको हालीमुहालीमा मात्रै रम्ने शाषकहरूको नाम नेपाली इतिहासमा युग युगान्तरसम्म पनि दुर्गन्धित भइनै रहनेछ ।
Posted by Sangeen Shrestha at 10:24 PM No comments: Links to this post
हेटौडामा दुर्घटना भएका शुभश्री यातायता र मेट्रो डिलक्सलाई सञ्चालनमा रोक
काठमाडौं,कात्तिक १७ – सरकारले शुभश्री यातयात र मेट्रो डिलक्स यातायातका बस सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । शनिबार हेटौँडामा दश यात्रुको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनामा लापरबाही भएको ठहर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले १५ दिनका लागि रोक लगाएको हो ।
विभागले दुर्घटनामा दुवै गाडीको लापरबाही देखिएकाले सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको छ । काठमाडौंबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको ना.४ख ५४४८ नम्बरको शुभश्री यातायातको बस इलामबाट काठमाडौंतर्फ आइरहेको ना.५ख ४८४१ नम्बरको मेट्रो डिलक्ससँग ठोक्किएर शनिबार दुर्घटना भएको थियो । घटनामा दशजनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३० जना घाइते भएका थिए ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
Posted by Sangeen Shrestha at 9:26 PM No comments: Links to this post
खेल हेर्दा युवतीलाई जेल
तेहरान (बीबीसी), कार्तिक १७ - पुरुषबीच भएको भलिबल खेल हेर्ने प्रयास गरेको अभियोगमा इरानमा एक युवतीलाई जेल सजाय दिइएको छ । इरानी मूलकी बेलायती नागरिक २५ वर्षीया गोन्चे गवामीलाई यस्तो एक वर्ष कैद सजाय दिइएको हो ।
लन्डनबाट कानुनमा स्नातक गरेकी उनलाई गत जुनमा तेहरान स्टेडियमबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनका वकिल अलिजादेह तबातबाईका अनुसार सजायको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । गवामी पक्राउ पर्नुको कारण भलिबल प्रतियोगिता नभई सुरक्षा जोखिम रहेको इरानी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
उनलाई एक सय २६ दिनदेखि तेहरानको कुख्यात जेल 'एबिन पि्रजन'मा राखिएको छ । उनका परिवारजन र साथीहरूले रिहाइको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । गवामीका परिवार र वकिललाई पक्राउको आधार नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ । 'निष्पक्ष र न्यायसंगत कानुनी प्रक्रिया हरेक नागरिकको अधिकार हो,' उनको रिहाइ माग गर्दै चलाइएको फेसबुक पेजमा उल्लेख छ, 'गवामीको त्यस अधिकारप्रति किन अधिकारीहरूले वास्ता नगरेका हुन् ?'
भलिबलका महिला प्रशंसक तथा महिला पत्रकारहरूलाई पनि तेहरानको आजादी स्टेडियममा प्रतियोगिता हेर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सोही क्रममा गवामीलाई पक्राउ गरियो ।
इरानी प्रहरी प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी मोगादमको भनाइमा त्यस्ता अवसरमा महिला र पुरुष एकसाथ रहनु सार्वजनिक हितविपरीत हो । गवामीलाई पक्राउ गरिएको समयमा पनि मोगादमले प्रहरीले कानुन र व्यवस्थाको पालना गरिरहेको बताएका थिए । महिला र पुरुषबीच अशिष्ट व्यवहार हुनबाट बचाउन फुटबल प्रतियोगितामा एकसाथ सामेल हुन दिन नहुने इरानी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
Posted by Sangeen Shrestha at 9:25 PM No comments: Links to this post
सन् १९८८ मे १४ को राति अमेरिकाको केन्टुकीमा एउटा कारले स्कुल बसलाई बेजोडले ठोक्कायो । तेलको ट्यांकी छ्यालब्याल भएर बसमा अचानक आगो लाग्यो । तत्काल ढोका पनि खुलेन । चर्चको प्रार्थना सकेर अबेला फर्किंदै गरेका विद्यार्थी त्यही आगोमा बल्न थाले । २७ जनाको त्यहीं मृत्यु भयो । ३४ जना घाइते भए । ६ जनामात्र सकुशल निस्कन सके । अमेरिकी इतिहासमै वीभत्समध्ये पर्ने त्यस दुर्घटनाका दोषी कारचालक ल्यारी वाइने महनीलाई त्यहाँको अदालतले १६ वर्ष जेल हाल्यो । ल्यारीले रक्सी पिएकाले दुर्घटना भएको भन्दै अदालतले कडा सजाय दिएको हो ।
हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायातका यस्ता थोक दुर्घटना कति हुन्छन् कति । अचेल दुर्घटनाका समाचार नआउने दिनै हुँदैनन् । अस्ति १५ गते राति मात्र मकवानपुरको बस्तीपुरमा शुभश्री ट्राभल्सको बसले अर्को बसलाई ठक्कर दियो । यात्रुहरूका अनुसार शुभश्रीका मालिक र चालकबीच बाटामा झगडा भइरहेको थियो । चितवनको रामनगरमा दुवैले रक्सी पिए । झगडा झन् बढ्यो । त्यहाँ खाना खाएर अघि बढेपछि गाडीको गति अनियन्त्रित भयो । यात्रुहरूले सचेत गराउँदागराउँदै बस्तीपुरमा दुर्घटना भयो । १० जनाको मृत्यु भयो । ३० जनाभन्दा बढी घाइते भए । चालक र मालिक दुवै पत्तै नपाई भागे ।
पछि चालक पक्राउ त परे । तर नेपालको कानुनअनुसार उनी केही दिन हिरासतमा बस्छन् । मालिक र व्यवसायी समितिले मृतकका आफन्त र घाइतेलाई केही क्षतिपूर्ति दिन्छन् । त्यतिन्जेलमा चालक छुटिसक्छन् । मालिकले मुक्ति पाइहाल्छन् । अत्यन्त लापरबाहीपूर्ण तरिकाले सामूहिक नरसंहार गर्ने व्यक्ति केही दिनमै अर्को बस चलाइरहेको भेटिन्छ । बिमाबाट रकम पाएर मालिकले पुरानाको साटो नयाँ बस किन्छन् । दुर्घटना त चिठ्ठा परेजस्तो हुन्छ ।
छिमेकी भारतमा लापरबाहीपूर्ण ड्राइभिङ गर्दा दुर्घटना भएको पुष्टि भए १० वर्षसम्म जेल हाल्ने कानुन छ । ज्यानै मार्नेसम्म नियतको लापरबाही पाइए मृत्युदण्ड पनि हुन्छ । गतवर्ष पुने अदालतले एक लापरबाह चालकलाई मृत्युदण्ड नै दिएको थियो । अर्काको बस कब्जामा लिई हुइँक्याइरहेका सन्तोष माने त्यतिबेला पक्राउ परे, जतिबेला जताततै मान्छे किच्याइसकेका थिए । तीव्र गतिको अनियन्त्रित बसले ९ जनाको ज्यान लिएको थियो । ३७ जना घाइते भएका थिए । यसलाई 'नियत'समेत जोडेर अदालत मृत्युदण्डको फैसलामा पुगेको हो । ती चालकको पुनरावेदनलाई माथिल्लो अदालतले खारेज गरिदियो ।
नेपाली सडक दुर्घटनाको इतिहासमा सर्वाधिक अविस्मरणीय एमाले नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रतिको निधनलाई लिइन्छ । उनीहरू चढेको गाडी दासढुंगामा त्रिशूलीमा खसाउने चालक अमर लामालाई चितवन अदालतले आजीवन काराबास तोकेको थियो । पछि सर्वोच्चले पाँच वर्षमा झार्‍यो । छुटेपछि लामा पार्टी फेरेर कांग्रेसमा लागे । २०६० मा माओवादीले उनको हत्या गर्‍यो । सबै रहस्यै-रहस्यमा रहे । यसले दिने संकेत के हो भने दुर्घटनाको फितलो कानुनले सर्वसाधारणदेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्म असुरक्षित बन्दै गएका छन् । चालकको लापरबाही बढेको छ ।
गाडीले किचेर कुनै व्यक्ति घाइते वा अंगभंग भयो भने लाखौं खर्च हुनसक्छ । मृत्युको त क्षतिपूर्ति नै छैन भन्दा हुन्छ । केही सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाले बेहोर्छन्, केही बिमाले । नपुगेको थोरबहुत मालिकले । दुर्घटना गराउने चालकले केही दिन हिरासतमा बसिदिनुपर्ने मात्र हो । त्यही भएर कसैलाई सवारी साधनले ठोक्किइगए ब्याक गरेर भए पनि मार्छन् । वर्षौंवर्ष झन्झट बेहोर्नुभन्दा सिध्याई नै दिन्छन् । यसलाई ज्यान मारेको अभियोग लगाउने गरिएको छैन । सवारी दुर्घटनाका नाममा सजिलै उन्मुक्ति दिइन्छ ।
दुर्घटनाका मुख्य कारण मादक पदार्थ सेवन, तीव्र गति, निद्रा, मोबाइल लगायत हुन् । एउटै चालकलाई रातभरि बस चलाउन लाउनु, यात्रु र मालिकले दुव्र्यवहार गरेर वा दुर्वचन लगाएर आक्रोशित बनाउनुका कारण पनि घटना भएका छन् । लापरबाहीलाई सामान्य भवितव्य ठान्नु हुँदैन । हातमा लाइसेन्स हुनेले पनि आफ्नो र अरूको ज्यानलाई बराबर ठान्नुपर्छ । पूर्ण सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वासमा यात्रा गर्नेहरू कहिले भीरबाट खस्छन् । कहिले नदीमा डुब्छन् ।
क्यानाडामा मादक पदार्थ सेवन गरेर ड्राइभिङ गर्नेलाई आजीवन कारावाससम्मको व्यवस्था छ । परीक्षण गर्दा प्रति १०० मिलिमिटर रगतमा ८० मिलिग्रामभन्दा बढी अल्कोहल पाइएमा अत्यधिक सजाय तोक्न सकिन्छ । नेपालमा मापसे गरेर सवारी चलाउनेलाई लाइसेन्स खोस्ने, सामान्य जरिवाना गराउने र तालिम दिइने गरिएको छ । उसले पार गर्ने गन्तव्यसम्मको सडकका सबै जीवनलाई खतरामा पारेर हिँड्दा जम्मा यति सजाय हुन्छ । प्रहरीको चेकिङ छल्दै भाग्ने त झन् जोगिइहाल्छन् । राति खासगरी लामो दूरीका बसका चालकको जंगल पुगेपछि चेकिङ कमै हुन्छ । दुर्घटना प्रायः त्यस्तै अवस्थामा हुन्छन् ।
वल्र्ड हेल्थ र्‍याङकिङका अनुसार बढी दुर्घटना हुने देशमध्ये नेपाल १२७ औं नम्बरमा पर्छ । यहाँ एक लाखमा ११.४ जनाको दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ । सबैभन्दा धेरै नामिबियामा ५३.४ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा हामी तलै भए पनि हाम्रो गति बढ्दो छ । लापरबाही बढ्दो छ । निर्दोषहरूको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ ।
त्यसलाई सुधार्न कडाभन्दा कडा कानुन नबनाई हुँदैन ।
मेरो विचार ः जुनसुकै अपराधीले पनि अपराध गरिसकेपछि मैले अपराध गरेको होइन वा मैले जानाजान गरेको होइन भन्छ, जुन स्वभाविक हो । चोरले कहिले म चोर हुँ भन्छ र? यो चालक हत्यारा हो, जघन्य अपराध गर्ने अपराधी हो । मृत्युदण्ड नै अन्तिम तथा कठोर सजाय होइन । मेरो विचारमा त मृत्युदण्ड जती सजिलो सजाय केही छैन, केहीछिनको तडप पछि त्यसले मुक्ती पाइहाल्छ । यस्तो अपराधको लागि १५/२० वर्षको जेल सजाय पनि कम हुन्छ । त्यसैले, यसलाई जनताको कठघरामा उभ्याई चारै हातखुट्टा काटेर डुँडो र लङ्गडो बनाईदिनुपर्छ ताकी यसले आफ्नो अपराधको सजाय जीवनभरी प्रत्येक पल पाइरहोस् ।.
यो ६ दिन अँधेरो हुन्छ भन्ने कुरोले अझैसम्म पनि हल्लिखाल्ली मच्चायो । यो हावादारी खबर (hoax) हज्लर्स डट कमले नासाको प्रशासक चार्ल्स बोल्डनको हवाला दिएर प्रसारमा ल्यायो । यसले छोटो समयमै फेसबुकमा ६ लाख “likes” हासिल गरेको थियो । तर अक्टोबर ३० मा यो खबर ‘द एपोक टाइम्स’ भन्ने पत्रिकाले हावादारी भएको प्रमाणित गरिदियो । मैले भने थाहा पाइन र आफ्नो भनाइ समेत फेसबूकमा शेयर गरेको थिएँ । तर, एक घण्टा पनि नपुग्दै मेरा मित्रहरूले यो हावादारी भएको लिंकहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । र, मैले तत्काल त्यसलाई हटाएको थिएँ ।
गएका केही दिनसम्म नेपालका कतिपय समाचार पोर्टलले ‘एक हप्ता पृथ्वी पूर्णरुपमा अँध्यारो हुने’ भन्दै हल्लीखल्ली गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल पनि यस्तै खबरका लिंकले भरिएका छन् । कतिपय विदेशी अनलाइनहरुले समेत यो खबर प्रकाशित गरेका छन् र यो अझै यो गरमागरम नै देखियो । त्यसैले यस बारेको केही तथ्य अघि ल्याउन मन लाग्यो ।
- See more at: http://dainiknepal.com/2014/11/26099.html#sthash.Nm7c11iL.waBHlbQ1.dpuf
वास्तवमा यस खबर हावादारी भएपनि सौर्यआंधी धेरै परसम्म उठ्ने र धेरै टाढा अन्तरिक्षमा पुगेपछि सेलाएर पृथ्वीसम्म आउने सूर्यको प्रकाशलाई छेक्न ठूलो कुरा हुन्न नै । यस्ता लप्काले पृथ्वी त के त्यो भन्दा परका ग्रहलाई पनि अँधेरो पार्न मात्र होइन आफ्नो चपेटामा पार्न पनि सक्दछ । संलग्न फोटोहरू हेर्नुहोस, सूर्यको अनुपातमा पृथ्वी र सूर्यबाट उठ्ने लप्का कत्रो र कस्तो देखिन्छ, हेर्दा नै थाहा हुन्छ । साढे चार पांच अरब वर्ष अघितिर पृथ्वीलगायत सबै ग्रहहरू नै सौर्य आंधीबाट हुत्याइएको लप्का सेलाएर त्यसैको कणबाट बनेको भन्ने सिद्धान्त वैज्ञानिकहरूले अघि सारेका छन् । यो सानो लप्काको कुरा त के नै भयो र ?
यही गत २०१२ सालकै कुरा हाम्रा सामू दृष्टान्त छ । यसबारेमा एभ्लिन ब्राउनिङ्ग ग्यार्रिस आफ्नो लेख Solar Storms: A Scary Near Miss!, March 23, 2014 मा लेख्छन- “अधिकांश पृथ्वीबासीले भोगे कि २०१२ साल कति गर्मी थियो थियो । तर धेरैलाई थाहा भएन कि हामी झन्डै खरानी नै भएका थियौं । त्यस साल सूर्यको ठूलै आगोको लप्का यता हानिएको थियो । यसले पृथ्वीका समस्त विद्युत सञ्जालनै झण्डै नष्ट गरेको थियो, हामी अलिकतिले जोगियौं” (http://www । almanac । com/blog/weather-blog/solar-storms-scary-near-miss) ।
यसै बारेमा सोलर म्यक्सका अन्तर्राष्ट्रिय टास्क फोर्स सदस्य आस्ली डेल भन्दछन- “यो दुर्घटना घटेको भए पृथ्बीभरका संचार र यातायातका सञ्जाल पूरै ध्वस्त हुने थियो र त्यसबाट झन्डै डेढ ट्रिलियन पाउण्ड नोक्सान हुन्थ्यो । Physics World भन्ने पत्रिकामा उनले लेखेका छन् “यस्ता कुराले पृथ्वीमा पक्कै गम्भीर असर गर्ने छ । ” नसाका वैज्ञानिक क्यारिङ्ग्टन लेभेल भन्छन “यस्तो घटना हरेक १५० वर्षमा एकपल्ट हुन्छ नै र यसपल्ट त ५ वर्ष नाघी सकेथ्यो ।”
‘द एपोक टाइम्स’ले बिहिबार अक्टोबर ३० मा जनायो कि, पहिले त यो हावादारी हल्लाले डिसेम्बर २०१२ मा तीन दिन अँधेरो हुनेछ भनेको थियो र यस अन्धकार भएका दिनमा पृथ्वी अर्को आयाममा प्रवेश गर्नेछ । त्यसपछि त्यसमा अरू ३ दिन थपेर यही वर्ष सौर्य आंधीको कारणले डिसेम्बरको २१, २२ र २३ मा यो घटना हुनेछ भनेको थियो । अर्थात २०१४ को डिसेम्बरमा यो हुन्छ भन्ने कुरा पछि थपिएका हुन् । त्यसपछि अरू कुरा “NASA Confirms Earth Will Experience6Days of Total Darkness in December 2014!” शीर्षक साथ थपिएको थियो । जसले थपेर भन्यो- गत २५० वर्ष पछि पृथ्वीमा ६ दिन अर्थात् २१६ घण्टा मंगलबार डिसेम्बर १६ देखि सोमबार २२ डिसेम्बरसम्म पृथ्वी पूरै अन्धकारमय हुनेछ । सूर्यमा उठेको बिशाल आँधीको कारणबाट उब्जिएको कणहरूबाट ९०% प्रकाश छेकिएर यस्तो हुनेछ । नासाको वैज्ञानिक अर्ल गोडोयले पूर्णत: कृतिम प्रकाशको व्यवस्था गरिने छ र पृथ्वीमा अरू कुनै समस्या भने हुने छैन । चार्ल्स बोल्डनले उक्त समयाबधिभर शान्त रहन आह्वान गरेका छन्, आदि ।
जे होस अब सबैले बुझ्न पर्‍यो। नासाले नै यो हावादारी भनी सकेको स्थिति छ र हामीले हावादारी नै मान्न पर्‍यो। त्यसैले यस्ता हावादारीको पछि नलाग्न दैनिक नेपालमार्फत आग्रह पनि गर्दछु ।
Posted by Sangeen Shrestha at 9:13 PM No comments: Links to this post
के साँच्चै अन्धकार हुन लागेको हो त पृथ्वी ?
सौर्य आँधीले प्रकाश छेकिन्छ ?
सुर्य एक बिशाल आणविक बादलको अंशबाट आज भन्दा करिब ४.५७ अरब बर्ष पहिले निर्माण भएको हो । हाम्रो सुर्यभन्दा दश हजारदेखि दश लाख गुणासम्म ठुला अणुहरुको बिशाल भीमकाय बादललाई बिशाल आणविक बादल भनिन्छ । यो कहिलेकहिँ सैयौं प्रकाश बर्षको ब्याससम्म पुग्दछ ।जहाँ हाम्रो सौर्यमण्डलको ब्योमको कणहरुको घनत्व एक कण प्रति घनसेन्टिमिटर हुन्छ, त्यहाँ यस्तो बादलमा १०,००० देखि १०,००,००० कण प्रति घन सेन्टिमिटरसम्म पुग्न सक्छ । यस घनत्वमा यी बादल भित्र बिबिध किसिमका आकृतिहरु बन्न पुग्दछन् । जस्तो कि, गोलो-बाटुलो-गुच्चाकार आदि इत्यादी । सोहि घनत्वको आधारमै सुर्यले पनि आफ्नो आकार प्राप्त गरेको छ, जसलाई आज हामी नियाल्न सक्छौं ।
अधिकांश हाइड्रोजन अनि हिलियम ग्याँसबाट सुर्यको निर्माण भए झैँ अन्य ताराहरु पनि सोहि बिधि अनुसार निर्माण भएको हुन् सक्ने बैज्ञानिकहरुको अनुमान छ । सुर्यको सम्बन्धमा जुन आयु निकालिएको छ, यो ‘तारकीय विकास’ को ‘कम्प्यूटर मण्डल’ को प्रयोग र ‘न्युक्लियोकोस्मोक्रोनोलोजी’ को माध्यमबाट अनुमानित हो । परिणाम प्राचीनतम सौर्यमंडल सामाग्रीको ‘रेडियोमिट्रिक तिथि’ कै अनुरुप छ, ४.५६७ अरब बर्ष प्राचिन ‘उल्कापात’को अध्यन ‘अल्पजिवी आइसोटोपो’ को स्थिर नाभिकको संकेत देखाउँछ, जस्तो कि आइरन-६०, जो केवल विस्फोटित, अल्पजीवी तारामा निर्माण हुन्छ । यो संकेत गर्छ कि, त्यो स्थान जहाँ सुर्य निर्माण भएको छ, नजिकमा एक वा सो भन्दा बढी सुपरनोभा अबश्य हुनु पर्दछ । कुनै नजिकको सुपरनोभाबाट निक्लिएको ‘आघात तरङ्ग’ले आणविक बादल भित्रको ग्याँसलाई संकुचित बनाएर सुर्यको निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हुन् सक्ने अनुमान छ । र कुनै क्षेत्र आफूमै निहित गुरुत्वबलको अधिनबाट निर्माण भएको हुन् सक्छ । जस्तो कि, बादलको कुनै टुक्रा आफैमा खाँद्दिन्छ, ‘कोणीय गतिमा संरक्षण’ को कारण यो पनि घुम्न थालेको हुनु पर्छ । अनि बढ्दो दवाबको कारणले तातिन सक्छ । धेरै ठुलो दवावको कारणले द्रब्यराशी केन्द्रमा संकुचित हुन् गइ प्रतिक्रिया स्वरूप बिस्फोट हुन् गएको हुन् सक्छ । परिणाम स्वरूप केन्द्रमा अवस्थित मूल पदार्थ सुर्य बन्न गयो भने बाँकी ओरिपरी रहेका तत्वहरु विस्फोटनका क्रममा उछिट्टिएर वर्तमान सौर्यमंडलका अन्य सदस्यहरु आज अस्तित्वमा देखिएका ग्रह-उपग्रह इत्यादिको रुपमा बिद्द्यमन भएको बैज्ञानिक राय छ ।
त्यस्तो आणविक बादलको ‘कोर’ को गुरुत्वबलको दवाबले अत्यधिक उष्ण पैदा गराएर बाहिरी सतहसम्म अधिक ग्यास संचालित गराई, अन्तत: ‘नाभिकीय संलयन’ लाई सक्रिय गरायो । यस प्रकारले सुर्यको जन्म भयो ।
सौर्यमंडलको केन्द्रमा अवस्थित एउटा मध्यम खालको तारा जसको ओरिपरी अन्य अबयबहरु परिक्रमा गर्ने गर्दछन् । सूर्य हाम्रो सौर्यमंडलको सबै भन्दा ठुलो पीन्ड हो । यसको ब्यास लगभग १३ लाख ९० हजार किलोमिटर छ, जुन पृथ्वी भन्दा लगभग १०९ गुणा अधिक हो । उर्जाको शक्तिशाली भण्डारको रुपमा रहेको सुर्य मुख्य रुपमा हाइड्रोजन र हिलियम ग्याँसको एउटा बिशाल गोला हो । आफ्नो केन्द्र भागमा हुने परमाणु बिलय प्रक्रियाद्वारा यसले उर्जा पैदा गर्दछ । सुर्यबाट उत्सर्जित भएको एउटा सानो अंश मात्रै पृथ्वीमा आइपुग्छ । जसको १५ प्रतिशत अन्तरिक्षमा परबर्तन भएर जान्छ । ३० प्रतिशतले भने पानीलाई बाफ बनाउन सहयोग पुर्याउँदछ भने बाँकी उर्जा रुख बिरुवा नदीनाला-समुन्द्र आदिले खपत गर्दछ । यसको मजबुत गुरुत्वकर्षण शक्तिले पृथ्वी लगायतका अन्य ग्रहहरुलाई आफूतर्फ खिचेर राखेको हुन्छ ।
सूर्यबाट पृथ्वीको औसत दुरी लगभग १४,९६,००,००० किलोमिटर (९,२९,६०,००० माइल)छ । यसको प्रकाश हामीसम्म आइपुग्न ८ मिनेट ३० सेकेन्ड लाग्दछ । यसै प्रकाशीय उर्जाबाट प्रकाश संस्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव-रासायनिक अभिक्रिया हुन्छ, यो नैं जीवनको आधार हो । यसले नै पृथ्वीको जलबायु र मौसमलाई प्रभावित गर्दछ ।
सुर्यको सतहको निर्माण हाइड्रोजन ७३.४६%, हिलियम २४.८५%,फलाम ०.१६%,निकेल ०.०९%,अक्सिजन ०.७७%,सिलिकन ०.०७%,सल्फर ०.१२%, मैग्नेसियम ०.०५%, कार्वन ०.२९%, नियोंन ०.१२%, क्याल्सियम, क्रोमियम तत्वबाट भएको छ ।
यो बल्दै गरेको ग्याँसको पिन्डलाई हामी दूरदर्शन यन्त्रको सहायताले नियाल्न सक्छौं । यसको सतहमा सानाठूला दाग-धब्बाहरु सजिलैसँग देख्न सक्छौं ।यसलाई सौर्य-दाग भनिन्छ । यो दाग आफ्नो स्थानबाट सरिरहेको देख्न सकिन्छ । यसलाई हेरेर बैज्ञानिकहरुले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने सूर्य पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्दछ, जुन २७ दिनमा सम्पन्न गर्दछ । जुन प्रकारले पृथ्वी अनि अन्य ग्रहहरु सुर्यको परिक्रमा गर्दछन, उसै प्रकारले सुर्यले पनि आकाशगंगाको केन्द्रलाई परिक्रमा गर्दछ । जसलाई परिक्रमा गर्न सूर्यलाई लगभग २२ देखि २५ करोड बर्ष लाग्ने गर्दछ । यो अवधिलाई निहारिका बर्ष भनिन्छ । यसले परिक्रमा गर्ने गति २५१ किलोमिटरप्रतिसेकेन्ड हुन्छ ।
सूर्यक्षेत्रको सीमा यानिकी हिलियोस्फियर (heliosphere):-
हाम्रो सौर्यमंडल एउटा अत्यन्तै ठुलो बिबिराहरुले घेरिएको हुन्छ जसलाई हिलियोस्फियर (heliosphere) भनिन्छ ।हिलियोस्फियर (heliosphere) सुर्यबायुद्वारा बन्न गएको त्यस्तो बिबिरा (फोका) हो, जस अन्तर्गत सुर्यद्वारा उत्सर्जित सबै पदार्थहरु रहेको हुन्छ ।तैपनि यो बिबिराको भित्र हिलियोस्फियर भन्दा बाहिरबाट आएका अत्यन्तै उर्जावाला कणहरु पनि प्रवेश गर्न सक्छन् ।
सौर्यबायु यो कुनै ताराको बाहिरी बाताबरणद्वारा उत्सर्जित आवेषित कणको एउटा धाराप्रवाह हो । सौर्यबायु मुख्यतः अत्यधिक उर्जावाला इलोक्ट्रोन र प्रोटोनबाट बनेको हुन्छ, जसको उर्जामा कुनै पनि ताराको गुरुत्व प्रभावबाट बाहिर जान सक्ने क्षमता अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । सौर्यबायु सुर्यको हर दिशामा प्रवाहित हुन्छ जसको गति केहि सय किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ । सुर्यको सन्दर्भमा यसलाई सौर्यबायु भनिन्छ भने अन्य ताराहरुको सम्बन्धमा यसलाई ब्रह्माण्ड बायु भनिन्छ ।
सुर्यबाट केहि दुरीमा रहेको प्लुटोभन्दा धेरै बाहिर सौर्य बायु खगोलीय माध्यमको प्रभावले मत्थर हुन् जान्छ । यो प्रक्रिया केहि चरणमा हुन्छ । खगोलीय माध्यम हाइड्रोजन अनि हिलियमबाट बनेको हुन्छ जुन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा फैलिएको हुन्छ ।
सौर्य बायु सुपरसोनीक गतिबाट कम हुँदै सबसोनिक गतिमा चल्दछ । यस चरणलाई टर्मीनेशन शक(Termination Shock) भनिन्छ ।
सबसोनिक गतिमा चलेको सौर्यबायु खगोलीय माध्यमको प्रवाहको प्रभावले प्रभावित पार्दछ र सौर्य बायुलाई धुमकेतुको पुच्छर जस्तै आकृतिमा पुर्याईदिन्छ, जसलाई हीलीयोशेथ(Helioseath) भनिन्छ ।
हीलीयोशेथ(Helioseath)को बाहिरी सतह जहाँ हिलियोस्फियर खगोलीय माध्यमसंग मिल्दछ, जसलाई हिलियोपाज (Heliopause)भनिन्छ ।
हिलियोपाज क्षेत्र सुर्यले आकाशगंगाको केन्द्रलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा खगोलीय माध्यममा एउटा हलचल उत्पन्न गर्दछ । यो हलचल हुने क्षेत्र जुन हिलियोपाज भन्दा बाहिर हुन्छ जसलाई Bow Shock भनिन्छ ।
किन आउँछ सौर्य आँधी ?
थोरै उल्लेख माथि नै गरिएको छ कि सुर्यले परमाणु बिलय प्रक्रियाद्वरा उर्जा पैदा गर्दछ । सुर्य एउटा बिशाल हाइड्रोजन बम नै हो जसका अणुहरु लगातार बिष्फोटन भैरहेका छन् । हिलियममा रुपान्तरण भै रहेका छन् । अरबौ बर्षदेखि यो आगोको ज्वाला निरन्तर दन्कि नैं रहेको छ । यसरि पड्कदै रहेको बमले उत्सर्जन गरेको उज्यालोसंगै हामीले जीवन अनि दृष्टि पाएका छौं ।
बल्दै गरेको आफ्नै अगेनोमा यदि हामीले ठोस-ठास पार्यौं भने त्यहाँबाट थप अरु झिल्काहरु बाहिर निस्कन्छन् । आगो आवाज निकाल्दै अरु दन्कन थाल्छ । त्यो अगेना बाट निक्लिएको झिल्का अग्नि-आँधीको एउटा सानो रुप हो । उर्जा रहुन्जेल हलचल पैदा गर्दछ । यो भनेको स्वयंमा अन्तर्निहित शक्तिको परिणाम हो ।
त्यसै गरि पुर्णिमाको रातमा समुन्द्रमा ज्वारभाटा आउँदछ । चन्द्रमाको गुरुत्व बलले समुन्द्रको पानीलाई माथि माथि उचाल्छ । जुन अलि बढी भयो भने समुन्द्री आँधी बन्न पुग्दछ । यो चै बाहिरी शक्तिको प्रभावले देखिएको परिणाम हो ।
सौर्य आँधीमा यी दुवै उदाहरण लागू हुन्छन् । एकातर्फ सुर्य स्वयं बिस्फोट हुँदै उर्जा बाहिर फ्याँकी रहेको अवस्था अनि अर्को तर्फ अरबौं गुणा शक्तिशाली ताराहरुको समुह आकाशगंगालाई पनि परिक्रमा गर्ने हुनाले त्यसको गुरुत्वबलको प्रभावले बल्दै गरेको सुर्यको लप्कालाई आफु तर्फ खिच्न पुग्दछ । जुन लप्काहरु सूर्यबाट फुत्किएर सुपरसोनिक गतिमा चारै तर्फ आंधीको रुपमा दौडने गर्दछ र एउटा सीमारेखामा पुगेर आफुलाई नियन्त्रण गर्दछ । जुन सीमालाई हिलियोस्फियर (heliosphere) भनिन्छ ।
धेरै बैज्ञानिक भनाइहरु पनि अनुमानित नै छन् । धारणा बनाउन हर कोहि स्वतन्त्र छन् । त्यस आधारमा सबै भन्दा सङ्गत ठहरिन सक्ने आफुलाई लागेको अनुमानलाई सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक नै हो भन्ने मेरो विचार छ ।
पृथ्वीमा सौर्यवायुको प्रभाव:-
नासाको अनुसार आगामी डिसेम्बरमा ६ दिनसम्म अध्यारो हुनेछ । जस अनुसार डिसेम्बर १६ मंगलबार देखी डिसेम्बर २२ सोमबार अर्थात पुष १ गते देखि ७ गतेसम्म दिनरात पुरै अध्यारो हुने बताइएको छ ।
सौर्य आँधीका कारण तीन दिनसम्म पूर्ण अन्धकार हुनेछ भने बाँकी तीन दिन निकै बाक्लो कुहिरो र धुलोले गर्दा सूर्यको ९० प्रतिशत भाग छेकिएर अध्यारो हुने उसको भनाई छ । नासाका प्रमुख चार्ल्स बोल्डेनले यस घटनाक्रमको जानकारी सार्वजनिक गर्दै सबैलाई शान्त रहन आग्रह समेत गरेका छन् । यो सौर्य आँधीले ल्याउने अवस्था हो र यो विगत २५० वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य आँधी हो । यो करिव २ सय १६ घण्टासम्म रहने बताइएको छ ।
सूर्यमा जब आँधी चल्छ, विश्वले ठुलो भौतिक क्षेतीको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवाबाट अकस्मात् वञ्चित हुनु्पर्ने हुनसक्छ। सौर्य आँधी आउने एघार वर्षे चक्रिय प्रणाली छ। सन १९२१ र १८५९ मा सौर्य आँधी पृथ्वीमा ठोक्किसकेकोले वैज्ञानिकहरू यसप्रति सचेत छन।
सौर्य आँधीले तेलका भूमिगत पाइपलाइनसमेतलाइ क्षतिग्रस्त पार्दछ। करोडाँ डिग्री फरेनहाइट तपाक्रमसहितका आयनित कण र घातक विकिरणले सौर्य आँधी बनेको हुन्छ। सूर्यमा ठूलो हलचल हुँदा अन्तरिक्षमा करोडौँ माइलसम्म बलिरहेको ग्यासका लप्का सेकेन्डमै फैलिन्छ।पृथ्वीमा चुम्बकीय क्षेत्र नहुँदो हो त सौर्य आँधीले यहाँको सबैकुरा नष्ट गरिसक्थ्यो। पृथ्वीलाई घेरिरहेको चुम्बकीय क्षेत्रले धेरै हदसम्म सौर्य आँधीको प्रभाव कम गर्छ। प्रतिघन्टा करिब १० लाख माइलको गतिमा चल्ने सौर्य आँधी पृथ्वीमा ठोक्किदा पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रले हामीलाई बचाउँछ। चुम्बकीय क्षेत्रले सौर्य आँधीका घातक कण र विकिरणलाई मात्र होइन सुदूर अन्तरिक्षबाट नियमितरूपमा आउने विकिरण र आयनित कणहरूलाई वायुमन्डलमा पस्न दिँदैन।
यस सम्बन्धमा पनि एउटा उदाहरण पेश गर्नु सान्दर्भिक होला । मानी लिनुस् तपाईंको घरको अगेनामा आगो दन्किरहेको छ । अब त्यो दन्किएको आगोमा मकैका नसुकेका खोयाहरु अथवा काँचा दाउराहरु हाल्नु भयो भने धुवाँ आउने मात्रै हैन यति पिरो हुन्छ, श्वास फेर्न पनि मुश्किल पर्छ । धुवाँले पुरै घर रुमल्लिने छ । तपाईं अगेनो छोडेर टाप ठोक्नु हुनेछ । तर जहाँसम्म सुर्यको सवाल छ, चौतर्फी, सम्पूर्ण सतहमा आगो दन्किरहेको छ । त्यहाँ कसले बाहिरबाट लगेर काँचो मकैको खोया अनि नसुकेको दाउरा थप्छ र बलिरहेको आगो छेकिन्छ ǃ र, उज्यालो ढाकिन्छ ǃ ? त्यै पनि कसैको घरको अगेनामा पिल्पिलाउँदै गरेको झ्यासको आगो हैन सुर्य जसको उज्यालो २-४ धमाकाबाट निक्लदै गरेका धुलाका कणहरुले अबरुद्द गरुन । करोडौ डिग्री फरेनहाइटको तापक्रम स्वयं सक्षम छ त्यस्ता कणहरुको उपस्थितिलाई बिलिन गराउन । पलभरका लागि छेकिन सक्छ सुर्यका किरणहरु तर आजभोली जसरी हल्ला गरिंदै छ, २ दिन ४ दिन एक हप्ता अँध्यारो हुन्छ भन्दै, सम्भावना देखिंदैन ।
Posted by Sangeen Shrestha at 12:20 AM No comments: Links to this post
सुगौली सन्धिपूर्वको ग्रेटर नेपाल–हाम्रो अभियान
हाम्रो देश बिग्रीएको भ्रष्ट नेताहरुको कारणले भन्दा पनि अचेत नागरिकहरुको कारणले हो ।
जस्तो सरकार, त्यस्तै नेपाली जनता । यस्तै हो भने न नेपाल रहन्छ, न नेपाली जनता । अनी नेपाली जनताहरु त विदेशीको दाश हुन्छन् नै, नेताहरु र आफूलाई टाठाबाठा ठान्ने नागरिक समाज र अन्य केके समाजका बुर्जुवाहरु त्यो बेला आफू विदेशीको दाश भएको पनि पत्तै पाउँदैनन् ।
यदि नेपाली जनताहरु सचेत भएको भए जतिसुकै भ्रष्ट नेताहरु सत्तामा पुगे पनि जनताको खबरदारी, विरोध र दबाबको कारण कुर्सीमा बसेर काला कर्तुत र नाङ्गो नाच धेरैबेर देखाउन पाउने थिएनन् । तर यहाँ त एकले अर्काको मुख ताक्ने, सधैँ अरुकै भर मात्र परिरहने जनताको खराब बानीको कारण नै देश बिग्रीरहेको छ । यदि सबै जनताहरु एकजुट भएर भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहिनता आदिको विरुद्ध एउटै मात्र विरोधको आवाज उठाउने हो भने नेपाल पनि आज अन्य विकसित राष्ट्रहरुको दाँजोमा कमजोर हुने थिएन । त्यसैले नेता सप्रिने भन्दा पनि जनताहरु सचेत भएर जाग्यो भने मात्र नेपालको अग्रगामी परिवर्तन सम्भव छ ।
धेरैले हेरेको (Popular Posts)
India Should Return the Nepalese land
Dirgha Raj Prasai We, the Nepalese people cordially request the Indian government to return the missed Land of Nepal from Sugauli Tr...
नेपाली भाषाको उद्गमस्थल संरक्षणविहीन
नेपाली भाषाको उद्गम स्थलका रूपमा चिनिने डडेलधुराको अजयमेरुकोट संरक्षणविहीन हुँदा १५ सय वर्षअघिको पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थल खण्डहर बन्द...
काठमाडौं, कार्तिक २६ – बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संघर्ष समितिले हिन्दूराष्ट्रको पूनस्थापनाका लागि राष्ट्रव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने ...
माओवादी कार्यालयमा बम विस्फोट
नेपालगञ्ज, चैत १५- नेपालगञ्जको वडा नम्बर १६ स्थित कोरियन पुलमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको जिल्ला कार्यालयमा आज बिहान ५ बजे बम विस्फोट भएको...
बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा नेपाली स्वामित्वको दाबी छोड्न भारतले नेपालसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक...
जनमुक्ति सेनाले पनि हिन्दुराष्ट्रका लागि आन्दोलन ग...
शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत् ११३५ एवम् छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
भगवाग गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् ।
FIFA World Cup (Brazil-2014)